Dhegoweyne iyo Ilko Jiir , waxaanu leenahay nin caytamatay afkiisu isaga ayuu ku yaal .Cadaalada maad ka hadashaan markii Cigaal dalka gubay HARGEYSA iyo BURCABA gurigiisana Qasnada ka dhigtay! | Salaan Media
Dhegoweyne iyo Ilko Jiir , waxaanu leenahay nin caytamatay afkiisu isaga ayuu ku yaal .Cadaalada maad ka hadashaan markii Cigaal dalka gubay HARGEYSA iyo BURCABA gurigiisana Qasnada ka dhigtay!
Waxaa si nafla caarid a u caytamayey maalmahan aa kooxda dhaghaweyne iyo tageerayaashhooda oo aan waxba la hadhin hadaba maye markii CIGAAL qabiil dhan oo dalka deganaa uu rabay inuu xasuuqo hargeysa iyo burcaba markaas ayaa DHEGAHHWNHE is leeyhaay maant , dheghhwaynhanha maatida bhaadanyey Markaad TVyada daawato ayaa waxaad arkaysaa rag WAALAN oo aan bari hore lagu soo dhawaan oo caytamaya oo waxay ku hadlayaan aad yaabayso. Masuuliyiintii majaraha saaxada siyaasada dalka soo haaban waayay ee ku hungoobay iyo kuwii markii ay la qabsan waayeen hab maamulka dalka laga caydhiyay xilalkii markii horeba lagu tijaabinayay isla markaana si toos ah kaltankii siyaasadeed ee xisbiyada dalka ugu fashilmay ayaa sida la sheegayay maalmihii udambeeyay isku dayay inay sharciga dalka ku tuntaan denbina ka galaan qaranka iyo shacabka ay indhaha u ahaayeen.
Balse hagar daamooyinka ay dalka u horseedayaan waqtigan iyo mucaaradda waqtigeedi ka habsaantay ayaa daaha ka faydaysa kas darida xubnahaasi qaarkood.
Dheel dheelka iyo aflagaadada qaranka curdinka ah ee xubnaha siyaasiyiinta sheegta ee dabarka goostay ayaa iyaduna maqaamka gooni isu taaga qaranka wax udhimaysa.
Siyaasada dalku iyadoo ay tahay waqtigan tii ugu haboonayd isla markaana sida muuqata aanay jirin gol dalooloyin laga caban karo marka layskaga tago ku hadalka magac beeleed amba qabiil ayaa hadana dadka qaarkii waxay weli dabada hayaan dhaliilaha xukumadda iyo aflagaadada qaawan ee ay kula dul kufayaan maalinba maalinta ka dambaysa. Saaso ay tahay somalidu waxay tidhaahda ”Qoolay Qoor Qabasho Kuma Biyo Cabto”.
Xubnahan iska sheegtay inay tashi iyo toosin dalka ka samaynayaan midba maqaam ayuu ku suntan yahay shacabka Qaarkood way kasoo bixi waayeen waajibaadkii hore ee qaranku u igmaday isla markaana waa laga caydhiyay shaqadii qaranka xilka qarankuna waa meerto mana aha in laysugu dudo
Qaarna waxay kalsooni ka waayeen shacabka oo ay kasban kari waayeen si ay saaxada siyaasada ugu soo baxaan Sikastooy ahaataba somaliland waqtigan waxay umuuqataa markii uhoraysay ee ay cageeheeda isku taagtay xukumadduna way ku amaanantahay inay beesha caalamka ku qanciso qadiyada gooni isu taaga ee Somaliland.
Balse xubnaha isku dayay inay isku filaansha siyaasadeed ee xukumadda ciiro ku qariyaan waxan odhan lahaa fashilaada shacabka ha ka dhaxlina waxa faraha kula jirtaan iyo gefka dalka ka gelaysan intaa dhaliilaysan xukumada ee aad kiiska usamaynaysaan ka jawaaba ta duulanka ah ee siyaasiyiinta muqdisho .
Cali Dheere/ Hargeysa